တရုတျပွညျတှငျးက ဗိုငျးရပျဈကူးတာမရှိတဲ့နေ့ ၊ ပွနျအသကျဝငျလာတဲ့ ဝူဟနျ
Image captionလာကူတဲ့ ဆေးဝနျထမျးတှကေို ကြေးဇူးတငျ
တရုတျ နိုငျငံမှာ ပွညျတှငျးနအေခငျြးခငျြးက ကူးစကျတဲ့ ဗိုငျးရပျဈလူနာ မတှရေ့တဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဗိုငျးရပျဈရောဂါ စတငျပျေါထှကျလာခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလကုနျပိုငျးက စပွီး ဒါပထမဆုံးအကွိမျ ဖွဈပါတယျ။
အသဈတှတေဲ့ လူနာ ၃၄ ယောကျစလုံးက နိုငျငံခွားက ပွနျလာတဲ့သူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
ရောဂါစဖွဈတဲ့ ဝူဟနျမှာ ရောဂါရှငျ မရှိတော့ဘူးလို့လညျး တရုတျ နိုငျငံတျော ကနျြးမာရေး ကျောမရှငျက ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ဝူဟနျမှာ တလခှဲလောကျ အပိတျခံထားရတဲ့ မွို့သူမွို့သားတှလေညျး အုပျစုဖှဲ့ သှားလာတာ မဟုတျရငျ ပွနျထှကျခှငျ့ ရလာပွီ ဖွဈပါတယျ။
တခြို့ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှလေညျး ပွနျစခှငျ့ ပွုခဲ့ပါတယျ။
Image captionဝူဟနျသားတှေ ပွုံးနိုငျကွပွီ
ဝူဟနျက တခြို့ခရိုငျတှမှော ကပျဘေးကငျးပွီလို့ ကွညောထားပွီး စြေးငယျတှနေဲ့ သကျသာဆိုငျတှေ ပွနျဖှငျ့နပွေီ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံခွားက ဝငျလာတဲ့ ကူးစကျမှုက ကာကှယျဖို့အတှကျ ဆားဈရောဂါ လူနာတှကေို ကုခဲ့တဲ့ ဆေးရုံတရုံကို ဘဂေငျြးမှာ ပွနျဖှငျ့ထားပါတယျ။
မသင်ျကာတဲ့ လူနာတှကေို အဲဒီမှာ ထားဖို့ ဖွဈပါတယျ။
ဟောငျကောငျမှာတော့ ဝငျလာသူတှရေဲ့ သှားလာလှုပျရှားမှုကို သိနိုငျဖို့ လြှပျစဈ လကျပတျတှေ တပျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျပွညျမှာ သဆေုံးသူ အရအေတှကျ ၃၂၄၅ နဲ့ ရပျနပေမေယျ့ ဒီကိနျးဂဏနျးကို ဘယျလောကျ ယုံရမလဲ မေးခှနျးတှေ ထှကျနပေါတယျ။
တရုတျ၊ ဂပြနျ၊ တောငျကိုရီးယားနဲ့ စင်ျကာပူ နိုငျငံတှမှော ပွညျတှငျး ကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျလာပမေယျ့ တခွားက ကူးတာတှေ ပွနျဖွဈလာမှာကိုလညျး ပူပနျနကွေပါတယျ။
တရုတ်ပြည်တွင်းက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးတာမရှိတဲ့နေ့ ၊ ပြန်အသက်ဝင်လာတဲ့ ဝူဟန်
￼ဓာတ်ပုံ မူပိုင်STRImage captionလာကူတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးတင်
တရုတ် နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းနေအချင်းချင်းက ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်လူနာ မတွေ့ရတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းက စပြီး ဒါပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်တွေ့တဲ့ လူနာ ၃၄ ယောက်စလုံးက နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရောဂါစဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်မှာ ရောဂါရှင် မရှိတော့ဘူးလို့လည်း တရုတ် နိုင်ငံတော် ကျန်းမာရေး ကော်မရှင်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဝူဟန်မှာ တလခွဲလောက် အပိတ်ခံထားရတဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေလည်း အုပ်စုဖွဲ့ သွားလာတာ မဟုတ်ရင် ပြန်ထွက်ခွင့် ရလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း ပြန်စခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။
￼ဓာတ်ပုံ မူပိုင်STRImage captionဝူဟန်သားတွေ ပြုံးနိုင်ကြပြီ
ဝူဟန်က တချို့ခရိုင်တွေမှာ ကပ်ဘေးကင်းပြီလို့ ကြေညာထားပြီး ဈေးငယ်တွေနဲ့ သက်သာဆိုင်တွေ ပြန်ဖွင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက ဝင်လာတဲ့ ကူးစက်မှုက ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆားစ်ရောဂါ လူနာတွေကို ကုခဲ့တဲ့ ဆေးရုံတရုံကို ဘေဂျင်းမှာ ပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်။
မသင်္ကာတဲ့ လူနာတွေကို အဲဒီမှာ ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာတော့ ဝင်လာသူတွေရဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားမှုကို သိနိုင်ဖို့ လျှပ်စစ် လက်ပတ်တွေ တပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၃၂၄၅ နဲ့ ရပ်နေပေမယ့် ဒီကိန်းဂဏန်းကို ဘယ်လောက် ယုံရမလဲ မေးခွန်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်လာပေမယ့် တခြားက ကူးတာတွေ ပြန်ဖြစ်လာမှာကိုလည်း ပူပန်နေကြပါတယ်။
China no longer hasavirus Wu returns to life
This page is WhatsApp
This page Messenge
This Twitter page
Image captionThanks to the staff who helped
It was the first dayaChinese patient had been infected with the virus.
This is the first time since the end of December that the virus started.
All 34 patients were newly returned.
The China National Health Commission has announced that there is no longer any disease in Wuhan, the leading cause of the disease.
Residents who had been locked up in Wuhan foramonth andahalf have now been allowed to leave.
Some businesses have also been allowed to resume operations.
Image caption Youcan smile
Wuhan has declaredadisaster in some districts and has openedanumber of smaller stores and convenience stores.
Beijing has reopenedahospital that treated patients with shingles to prevent the outbreak.
It is to leave suspicious patients there.
In Hong Kong, it will provide electric clips to detect the movement of visitors.
The number of deaths in China stands at 3,245, but questions remain about how reliable this figure is.
Chinese Japanese, JapaneseSouth Korea and Singapore have been able to control the epidemic, but others are worried about the possibility of infection.
🏞GIC-Hlaing Koon ကက္ကူ Hotel က 2019 သီတင်းကျွတ်မှာ...
တရုတျပွညျတှငျးက ဗိုငျးရပျဈကူးတာမရှိတဲ့နေ့ ၊ ပွနျအ...